Warbixinta TARTAN &TACLIIN: Wareeggii 2aad habeenkii 1aad – Radio Daljir
Juunyo 5, 2018 2:08 b 0
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo xalay galay wareeggii labaad ayna maalgaliyaan shirkadaha SOMTEL iyo Jaamacada Badda Cas , ayaa waxaa ku ballansanaa qaybta hore dugsiyada sare ee kala ah Al-waaxa Garoowe iyo Mubaarak Dhahar. Cillad farsamo awgeed Guddiga waxa ay dib-dhigeen tartankii dhexmari lahaa labadaas dugsi sare.
Qaybtii labaad ee tartanka waxaa ku tartamay dugsiyada sare ee kala ah Eyl Sare iyo Shiikh Daahir Xasan Cagaaran. Labadaan dugsi ayaa waxaa dhexmaray tartan aad udag. Natiijadii ka soo baxday tartanka iyo cidda ay guushu raacday waxaa ku dhawaaqay Guddoomiyaha Guddiga Tartan & Tacliin Ustaad Yuusuf Suudi, kana dhegayso xiriiriyaha hoose.
Intaas kaliya ma aha e, intii uu socday barnaamijka Tartan & Tacliin ee xalay, Radio Daljir iyo shirkadda SOMTEL ayaa waxa ay dhegaystayaasha u soo bandhigeen su’aalo wata abaalmarino qaali ah.
Habeen danbe iyo Tartan & Tacliin, qaybta hore waa Maxamed Cawaale Sare fkf Suldaan Hurre Sare. Qaybta dambana waxaa ku tartami doonaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke Gaalkacyo iyo Bacaadweyn Sare.
Maqaalo Kale 311 Wararka 21437